Qaddiyaddii Qalbi-dhagax oo Dhinac U Dhacday. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Muqdisho(FMN)—Guddigii gaarka ahaa ee ku howlanaa baadhitaanka iyo soo bandhigidda qaabkii ay udhacday dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse oo looyaqaanay[Qalbi-dhagax]lagu wareejiyay Dawlada itoobiya, ayaa soo saaray warbixin kama danbays ah oo ay ku muujinayaan waxii ay kala kulmeen baadhitaankooda.
Warbixinta ayaa Maanta la horgeeyay golaha shacabka Soomaaliya,iyaga oo dood dheer kadibna go’aan ka gaadhay,soona gabagabeeyay kiiskaas.Waxa ayna Xubnaha Baarlamaanku ugu danbayntii ansixiyeen in arintaasi aan loo marin hab sharci ah, lagana talo-gelin Hay’adaha Garsoorka, iyada oo ay isla markaasna maareysay Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka keliya, laguna saleeyay go’aan ku dhisan xog aan sugneyn oo la siiyay Madaxda Qaranka.
Haddaba,Waxa aan halkan idinkugu soo gudbinaynaa nuqul kamid ah warbixintaas oo ay heshay shabakada warbaahinta ee Feer-feer Media Network(FMN).Sidan ayayna uqornayd warbixintu;-
2. Habraaca loo dhiibay Cabdikariim ma waafaqsanyahay shuruucda dalka?
Previous Previous post: Mukkulaal Madoow!
Next Next post: Madaxweyne;Farmaajo Oo Booqasho Ku jooga Immaaraatka Carabta.